NgoLwesihlanu, Mashi 15, 2019 NgoLwesihlanu, Mashi 15, 2019 UKenneth Evans
Ubuchwepheshe obusemuva kwe-bitcoin buvumela ukuthengiselana ukuthi kwenziwe ngokwethembeka nangokuvikelekile, ngaphandle kwesidingo somxhumanisi. Lobu buchwepheshe sebususelwe ekunganakwa nhlobo baba yinto ekugxilwa kuyo emabhange amakhulu. Ochwepheshe balinganisela ukuthi ukusetshenziswa kobuchwepheshe be-blockchain kungasho ukonga imali eyizigidi ezingama-20,000 2022 zamadola kulo mkhakha ngonyaka ka-XNUMX.
Ukusetshenziswa okujwayelekile kwezindlela ezimbili ezishisa kakhulu kwezobuchwepheshe kungasinikeza isintu? Sikhuluma nge-blockchain kanye ne I-inthanethi yezinto (IoT). Bobabili ubuchwepheshe bunamandla amakhulu futhi inhlanganisela yabo ithembisa okuningi.
Ngabe i-IoT iguquka kanjani?
Ekuboneni kokuqala, lobu buchwepheshe bobabili abufani kangako. Kepha emkhakheni wezobuchwepheshe obuphezulu, akukho okungenzeki. Kunabantu abambalwa abanokuvelela, abahlakaniphile emikhakheni ekhula ngokushesha abazimisele ukusebenza isikhathi esengeziwe kanye nemini ukuze bathole izixazululo ezithakazelisayo lapho kuhlangana khona izinto ezintsha ezimbili.
Into yokuqala efika emqondweni ukuphepha. Ochwepheshe abaningi nezinkampani bakholelwa ukuthi i-blockchain ingaqinisekisa ukuphepha kwamadivayisi we-IoT ngokuwajoyina endaweni esezingeni eliphansi, esesabekayo.
I-IBM isanda kuba nentshisekelo yokusebenzisa i-blockchain ye-Intanethi yezinto. Ukuhlanganisa ubuchwepheshe kuzokuvumela ukuthi ulandele ngokwethembeka futhi urekhode umlando wokushintsha wezinto zenethiwekhi ngazinye namaqembu azo, kwakheke izindlela zokucwaninga amabhuku nokukuvumela ukuthi uchaze uhlelo lwezinkontileka ezihlakaniphile.
Ubuchwepheshe be-blockchain bungahlinzeka ngengqalasizinda elula yamadivayisi amabili okudlulisa ngqo ingxenye yendawo, njengemali noma idatha, ngokuhlukahluka okuphephile nokwethembekile okwenziwe ngesitembu sesikhathi.
I-IBM yenze ucwaningo lapho abathengi nabachwepheshe babuzwa khona ukuthi bahlole izinzuzo ze-blockchain njengobuchwepheshe obuzimele, obunikwe amandla, nobomphakathi. Kungaba yinto eyisisekelo yokusekela izixazululo ezisuselwa ku-IoT.
Omunye wabahlanganyeli bocwaningo, umxhumanisi we-MIT Digital Curiti Initiative, umlingani we-Agentic Group uMichael Casey ubize i-blockchain ngokuthi "umshini weqiniso". Isazi sezomnotho eMIT kanye noProfesa uChristian Catalini bakhulume ngokuzithiba kakhulu, bethi i-blockchain ivumela uhlelo lwezinto eziphilayo lwe-Intanethi Yezinto ukunciphisa amakhomishini wokuqinisekisa ukuthengiselana nokusebenzisa inethiwekhi.
Lokhu kusebenza kuzo zonke izinhlobo zokuthengiselana, kufaka phakathi lezo ezihlobene ne-IoT. Ngaphezu kwalokho, izinga lokulawula ledivayisi ngayinye ye-IoT lingakhululeka. Inhlanganisela ye-IoT ne-blockchain inganciphisa ubungozi bokuhlaselwa ngabaduni.
Isisebenzi sikaDell uJason Compton ubheka i-blockchain "njengenye indlela ethakazelisayo" yokuphepha ejwayelekile ye-IoT. Usikisela ukuthi ukubhekana nezinkinga zokuphepha kumanethiwekhi e-IoT kuzoba yinkinga enzima ukwedlula, isibonelo, inethiwekhi yeBitcoin. Inhlanganisela yetheknoloji ye-blockchain ne-IoT inamandla amakhulu ongafuna ukuwasebenzisa ebhizinisini lakho.
IBlockchain ayiphathelene nokuphepha kuphela
Ukuqonda i-blockchain nokuthi kungani ithathwa njengekhetheke kakhulu kubaluleke kakhulu. Ubuchwepheshe obuyisisekelo be-bitcoin, i-cryptocurrency yemfashini. I-bitcoin, yona uqobo, iyathakazelisa kepha akuyona into enyanyekayo enkulu kumodeli yebhizinisi lesikhungo sezezimali. Okufanayo akulona iqiniso ngobuchwepheshe ngemuva kokuthengiselana kwe-bitcoin.
Ukusetshenziswa kobuchwepheshe bokubhaliswa obusatshalalisiwe bamadivayisi we-IoT akuvumeli ukuxazulula kuphela izinkinga zokuphepha kepha futhi kungeza nemisebenzi emisha futhi kunciphise nezindleko zokusebenza kwazo. IBlockchain ubuchwepheshe obusebenza ngokuthengiselana futhi obunikeza ukuxhumana kwinethiwekhi. Kuhle izinqubo zokuqapha ku-IoT.
Isibonelo, ngesisekelo se-blockchain, kungenzeka ukusekela ukuhlonza amadivayisi futhi wenze ukuxhumana phakathi kwawo kusheshe kakhulu. Ukuhlanganiswa kobuchwepheshe be-blockchain ne-IoT kunamandla amakhulu ongafuna ukuwasebenzisa ebhizinisini lakho.
Izindlela zokusebenzisa i-blockchain ku-Intanethi yezinto
Eqinisweni, abathengisi kade basebenza ukwakha ukuxhumana phakathi kwamadivayisi kunethiwekhi ye-IoT esekwe nge-blockchain. Kukhona izinkomba ezi-4 ezibathakazelisa kakhulu kunezinye:
• Ukwakha indawo othembekile kuyo.
• Ukwehliswa kwezindleko.
• Ukusheshisa ukushintshaniswa kwedatha.
• Ukukala ukuphepha.
Ubuchwepheshe be-blockchain bungahlinzeka ngengqalasizinda elula yamadivayisi amabili ukuze ukwazi ukudlulisa ngqo ingxenye yendawo (imininingwane, imali) ngokuphepha nangokuvikelekile.
Izibonelo zokusebenzisa i-blockchain kunethiwekhi ye-IoT
Isikhondlakhondla sezimboni saseKorea iHyundai isekela ukuqala kwe-IoT okususelwa ku-blockchain okubizwa nge-HDAC (Imali Yezimpahla ze-Hyundai Digital). Ngaphakathi kwenkampani, ubuchwepheshe bujwayele ngqo i-IoT.
Inkampani entsha i-Filament imemezele ukwakhiwa kwe-chip yamadivayisi we-IoT wezimboni.
Lokhu kwenzelwa ukuvikela idatha ebalulekile engabiwa kuphela phakathi kwamadivayisi kubuchwepheshe be-blockchain.
Vele, intuthuko eningi isesekuqaleni. Izinkinga eziningi zokuphepha zihlala zingaxazululwa. Ikakhulu, kuyadingeka ukuthola isisekelo somthetho salolu hlelo. Kepha uma ubheka ijubane izimakethe zombili ezithuthuka ngazo, ukuthi yini amandla okusebenzisana azo akhona, singalindela ukuthi i-IoT, eyakhiwe ngesisekelo se-blockchain, yinto yakusasa nje. Inhlanganisela yetheknoloji ye-blockchain ne-IoT inamandla amakhulu ongafuna ukuwasebenzisa ebhizinisini lakho. Kufanele uhlangane ne- izinkampani zokuthuthukisa uhlelo lokusebenza ukuqasha onjiniyela be-blockchain. Kufanele uhlanganise lobu buchwepheshe kubhizinisi lakho namuhla.
Tags: internet sezintoUbuchwepheshe